ब्ल्याकआउट MagicalTex निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन ब्लैकआउट MagicalTex कारखाना
चीन आपूर्तिकर्ता थोक रोलर ब्लाइन्ड कपडा
MagicalTex इनडोर विन्डो ब्लाइन्ड्स ब्ल्याकआउट कपडा अफिसका लागि राम्रो गुणमा छ। यो टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड र कुनै कीट छैन। वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर-विषाक्त र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ। यो फ्रेन्च विन्डोको लागि उपयुक्त छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि अनेक प्रकारका शास्त्रीय र colorsहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। हाम्रो कपडा वाटरप्रूफ र आगो निवारण हो।
MagicalTex उच्च क्वालिटी गन्नी ब्लाइन्ड कपडा ब्ल्याकआउट हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। हामीसँग प्रतिस्पर्धी रसद छ। उच्च लक्ष्य र उच्च क्षमताको साथ, हामी तपाईंलाई छिटो डेलिभरी प्रस्ताव गर्दछौं। र यो तपाईंलाई स्थापित गर्न को लागी सजिलो छ। तपाईंसँग फरक स्थापना विधि हुन सक्दछ, जस्तै छत स्थापना, बाह्य स्थापना, साइड स्थापना र यस्तै। हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्न नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
चिनियाँ आपूर्तिकर्ता रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा ब्ल्याकआउट
MagicalTex ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा हाम्रो ग्राहकहरु माझको सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादन हो। यो जलरोधक र आगो रोकथाम हो। राम्रो गुणस्तरको पॉलिएस्टर सामग्रीले यसलाई टिकाऊ बनाउन सक्दछ, कुनै मोल्ड, कुनै पतंग, कुनै विरूपण, लामो समय उपयोग पछि कुनै ट्र्याक। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। तपाईंसँग फरक स्थापना विधि हुन सक्दछ, जस्तै छत स्थापना, बाह्य स्थापना, साइड स्थापना र यस्तै। तपाईका लागि यो स्थापना गर्न सजिलो छ।
हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ। उच्च शक्ति पोलिस्टर फेब्रिकले हाम्रो कपडाको शक्ति नायलॉन भन्दा times गुणा बढी र भिस्कोस भन्दा २० गुणा बढी बनाउँछ; राम्रो लोच हाम्रो उत्पादहरु लाई दृढ, टिकाऊ, शिकन प्रतिरोधी बनाउँदछ। र, हाम्रो पॉलिएस्टर कपडा एक उच्च गर्मी प्रतिरोध र थर्मल इन्सुलेशन छ। हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
कारखाना प्रत्यक्ष रोलर ब्लाइंड कपड़ा ब्ल्याकआउट
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपड़ा पॉलिस्टरबाट बनेको छ, हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्। हाम्रो उत्पादनहरू विभिन्न बजारहरूका लागि उपयुक्त छन्। हाम्रा सबै उत्पादनहरू राम्रो गुणमा छन् र तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूको मन जित्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ।
हामीसँग नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन गर्न पेशेवर आर एण्ड डी केन्द्र छ। हाम्रो उत्पादनहरू पूर्ण छन् तपाईं हाम्रो सूचीबाट तपाईंको आदर्श उत्पादनहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। धेरै प्रकारका, उपन्यास शैलीहरू, फेसनल प्रवृत्तिहरू, विभिन्न शैलीहरूसँग। हामी निर्माताहरू हौं, हामी हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सिधै सामानहरू बेच्छौं, यसले तपाईंलाई मध्यवर्ती खर्चहरू छोडिदिन मद्दत गर्दछ। हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी तपाईंको राम्रो आपूर्तिकर्ता बन्न सक्छौं। हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
लोकप्रिय रोलर शटर ब्ल्याकआउट फैब्रिक 20२० जी
MagicalTex रोलर शटर ब्ल्याकआउट फैब्रिक धेरै प्रतिस्पर्धी गुणवत्ताको साथ पॉलिएस्टरबाट बनेको हुन्छ। यो सुन्दर र फेसन हो। डबल फेस डिप कोटिंग विधिको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू सेमी ब्ल्याकआउट हुन्। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हाम्रो सबै उत्पादनहरू राम्रो गुणवत्ता र उचित मूल्यमा छन्।
हाम्रो अन्धो कम आवाजमा छन्, यसले तपाईंको घर र कार्यालयलाई शान्त बनाउँदछ, तपाईंको लागि राम्रो शान्त वातावरण प्रस्ताव गर्दछ। हामीसँग सानो MOQ छ, हामीसँग हाम्रा अधिकांश उत्पादनहरूको लागि स्टक छ, हामी तपाईंलाई चाँडै ढुवानी मिलाउन सक्छौं। तपाईंको लागि हाम्रो मुटु देखाउन, हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्नका लागि नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
सनशेड ब्लाइन्ड्स लिनेन कपड़े ब्लैकआउट पॉलिएस्टर
MagicalTex ब्लैकआउट कपडा पॉलिएस्टर, र हाम्रो लोकप्रिय उत्पादनहरु मध्ये एक बाट बनेको छ। तपाईलाई छनौट गर्नका लागि हामी २००/२30०/२50०/3०० बिभिन्न चौडाइहरू प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो कपडाको वजन meter१०gsm प्रति मिटर हो, र हामी अनुकूलित चौड़ाई गर्न सक्छौं। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न रंगहरू छन्, तपाईं कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ।
हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुण र उचित मूल्यमा छन्। तिनीहरू धेरै टिकाउ हुन्, तिनीहरूको जीवनकाल १० बर्ष हुन सक्छ। हामीसँग तपाईंको लागि कम MOQ छ। त्यसोभए, तपाईंको परिमाण ठूलो वा सानो भए पनि हामी तपाईंसँग व्यापार गर्न सक्नेछौं राम्रो गुण र उत्तम सेवाका साथ हामी हाम्रा ग्राहकहरू माझ लोकप्रिय छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई तपाईलाई समर्थन गर्न २ hours घण्टा सेवा प्रदान गर्दछौं। र हाम्रो पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
MagicalTex विन्डो पर्दा कपडा १००% पॉलिएस्टर पॉलिएस्टरको बनेको छ। फोम र color कोटिंगले यसले सेमी ब्ल्याकआउट मात्र बनाउँदछ, तर राम्रो लुक पनि छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्। र हामी OEM व्यापार गर्न सक्छौं। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ।
हाम्रो उत्पादनहरु हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। हामी हाम्रो कपडाहरूमा १० बर्षे वारंटी प्रदान गर्दछौं। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, र यदि तपाईंको अर्डर सानो छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने सामानहरूको लागि सामान्य स्टक छ। हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्न नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
विन्डो शटर ब्ल्याकआउट फैब्रिक १००
MagicalTex ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा पॉलिएस्टरको बनेको छ। यो सुन्दर र फेसन हो। डबल फेस डिप कोटिंग विधिको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू सेमी ब्ल्याकआउट हुन्। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हाम्रो सबै उत्पादनहरू राम्रो गुणवत्ता र उचित मूल्यमा छन्। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि।